‘विमल गुरुङसित मेरो मात्र होइन पहाडका सबै जनताको मन दुखेको छ’ - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचार‘विमल गुरुङसित मेरो मात्र होइन पहाडका सबै जनताको मन दुखेको छ’
March 9, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मुख्य समाचार, म्यागजिन 0
शङ्कर गुरुजी भन्छन्, ‘मैले विमल गुरुङलाई समर्थन गरेको सत्ताको लागि होइन। जबसम्म विमल गुरुङसित मुद्दा थियो, मैले समर्थन र सहयोग गरें। अहिले विमल गुरुङ जुन वर्चस्वको लडाईँमा छन्, त्यस्तो राजनीति म गर्न चाहन्न। यसैले अलग बसेर आध्यात्मिक जीवन बिताउने निर्णय गरें। घर आउने इच्छा कसलाई हुँदैन? तर घर आएर म के भन्नु? म बिना उपलब्धीको खदा लगाउन चाहन्न। म झुट बोल्न सक्दिन। मैले मुद्दा होइञ्जेल सहयोग गरें। तर कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने- नबनाउने, यो मेरो समझको बाहिरको कुरा भो। विमल गुरुङले विना उपलब्धीको जुन निर्णय गरे, त्यसमा मेरो मात्र होइन सारा जनताको मन दुखेको छ। 13 जना सहिद भएको छ। विस्थापित फर्काउने तामझामको राजनीति मलाई ठिक लागेन। विस्थापितको नाममा राजनीति भयो। म यस्तो तामझाम गरेर फर्किन चाहन्न। म प्रदर्शनमा होइन दर्शनमा विश्वास गर्ने मानिस हुँ। विस्थापितहरूको नाममा भएको राजनीतिमा म सहभागी बन्न चाहन्न। यो हिलो छेपाईको, वर्चस्वको, सत्ताको राजनीति सकेपछि, चुनाउ सकेपछि म घर फर्किन्छु।’
केही दिन अघि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङ बिजनबारीको रेलिङ जानेवाला थिए। यही मेसोमा रेलिङमा जनताको नाममा एउटा पोष्टर देखा पऱ्यो।
पोष्टरमा लेखिएको थियो, ‘सबै विस्थापितहरू घर फर्किए तर हाम्रो शङ्कर गुरुजी खै?’
21 अक्टोबर 2020 को दिन विमल गुरुङ अचानक कोलकातामा एउटा वाहनमा देखा परे। गुरुङ एक जटाधारी बाबासित थिए। कतिले ती जटाधारी बाबालाई रेलिङ कैंजले क्षेत्रका ती नै गुरुजी ‘शङ्कर वशिष्ट’ हुन् पनि भने। हो होइन, कसैलाई थाहा छैन। तर एउटा कुरा पक्का हो, विमल गुरुङसित शङकर वशिष्ट साथै थिए।
शङ्कर विशिष्ट उर्फ गुरुजी विमल गुरुङका नितान्तै निकटका पुजारी हुन्। 2017 अघि देखि नै उनी विमल गुरुङसितै थिए। गुरुङको करिबी भएकैले 2017 मा गुरुजीलाई विभिन्न मुद्दा पनि लागेको थियो।
मुद्दा लागेकैले गुरुजी विमल गुरुङको निकटका पुजारीकोरुपमा साथसाथै हिँडे। बताइन्छ, शङ्कर गुरुजी विमल गुरुङको पूजा कोठामा बिना रोकटोक पस्ने व्यक्ति हुन्। विमल गुरुङलाई गुरुजीले धेरै नजिकबाट चिनेका छन्। गुरुङको सबै कुरा गुरुजीलाई थाहा छ।
दिल्लीबाट कोलकाता झर्दा विमल गुरुङसित सँगै आएका गुरुजी सिलगढीसम्म पनि विमल गुरुङसितै देखिए।
तर, त्यहीँदेखि अचानक गुरुजी हराए।
एक एक गर्दै सबै विस्थापित घर फर्किरहेका थिए। तर गुरुजीको अत्तोपत्तो थिएन।
विमल गुरुङले 20 दिसम्बरको दिन दार्जिलिङमा जनसभा गरे। त्यो जनसभामा पनि गुरुजी मिसिङ नै थिए।
विमल गुरुङ आफ्नै धुनमा व्यस्त भए। हुँदाहुँदै गुरुङ रेलिङ कैँजलेको भ्रमण गरिरहेका थिए। यता पोष्टर देखा पऱ्यो, उता विमल गुरुङ गुरुजीको घरै पुगे।
‘हाम्रो कान्छा कहिले घर फर्किन्छ?’-गुरुजीका वृद्ध पिताले विमल गुरुङलाई यही प्रश्न गरेका थिए। त्यतिखेर विमल गुरुङले ‘छिटो आउँछ’ भनेर आश्वासन त दिए तर विमल गुरुङलाई गुरुजीबारे कुनै अत्तोपत्तो थिएन।
यसैबीच विमल गुरुङलाई मिडियाले सोध्यो, ‘कहाँ छन् त तपाईँसितै हिँडेका शङ्कर गुरुजी?’
विमल गुरुङले भने, ‘मलाई थाहा छैन। 20 तारिकको जनसभापछि गुरुजी मिसिङ छ भन्ने मलाई थाहा भयो। पेटको बिरामीको कारण गुरुजी सिलगढी अस्पताल भर्ना भएका रहेछन्। उपचार सकेर तीन माइलमा बस्दा म भेट्न गएँ। उपचार गर्न हैदरावाद जान परामर्श र आर्थिक सहयोग पनि गरें। गुरुजी हैदरावाद गए, गएनन् थाहा भएन। मैले फोन पनि धेरै गरें। उठाएनन्। अर्कै नम्बरबाट कल गर्दा उठाए। मैले धार्मिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने परामर्श दिएँ। तर गुरुजीले ‘योगी आदित्यनाथ राजनीति गर्न सक्छन् भने म किन सक्दिन’ भने। त्यसै हो भने रेलिङ कैँजले समष्टी सम्हाल्नुस् भनेर तीनदिनको समय दिएँ। तर गुरुजी आउँदै आएनन्। त्यसयता मेरो सम्पर्कमा नै छैनन्।’
विमल गुरुङको सम्पर्कमा नरहेको गुरुजी तर आज अचानक मिडियाको सम्पर्कमा आएका छन्।
शङ्कर वशिष्ट हराएका रहेनछन्। बस्, विमलको साथ छोडेका रहेछन्। मिडियामा आउने वित्तिकै उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिए कि त्यसले विमल गुरुङको राजनीति बुझ्न धेरैलाई सहयोग पुऱ्याउने पक्का छ।
‘मैले विमल गुरुङलाई समर्थन गरेको सत्ताको लागि होइन,’ गुरुजीले भने, ‘जबसम्म विमल गुरुङसित मुद्दा थियो, मैले समर्थन र सहयोग गरें। अहिले विमल गुरुङ जुन वर्चस्वको लडाईँमा छन्, त्यस्तो राजनीति म गर्न चाहन्न। यसैले अलग बसेर आध्यात्मिक जीवन बिताउने निर्णय गरें।’
सबै विस्थापित घर आइसकेका छन्। तर किन शङ्कर वशिष्ट आएनन् त? उनले चलिरहेको यो खुल्दुलीको जवाब पनि दिए।
‘घर आउने इच्छा कसलाई हुँदैन? तर घर आएर म के भन्नु? म बिना उपलब्धिको खदा लगाउन चाहन्न,’ उनले भने, म झुट बोल्न सक्दिन। मैले मुद्दा होइञ्जेल सहयोग गरें। तर कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने नबनाउने यो मेरो समझको बाहिरको कुरा भो।’
वशिष्टले अर्को पनि घतपर्दो कुरा राखे, ‘विमल गुरुङले विना उपलब्धीको जुन निर्णय गरे, त्यसमा मेरो मात्र होइन सारा जनताको मन दुखेको छ। 13 जना सहिद भएको छ। यस्तो राजनीति मलाई गर्नु छैन।’
गुरुजी भन्छन्, विमल गुरुङ अहिले वर्चस्वको लडाईँमा छन्। सत्ताको लडाईँमा छन्। जसको लागि गुरुजी लगायत जनताले विमल गुरुङलाई समर्थन र सहयोग गरेकै होइनन्। गुरुजीलगायत जनताको आशा र भरोसा तोडिएको छ। यसैले विमल गुरुङसित उनीलगायत सारा जनताको मन दुखेको छ।
‘विस्थापित फर्काउने तामझामको राजनीति मलाई ठिक लागेन। विस्थापितको नाममा राजनीति भयो। म यस्तो तामझाम गरेर फर्किन चाहन्न। म प्रदर्शनमा होइन दर्शनमा विश्वास गर्ने मानिस हुँ,’ गुरुजीले भने, ‘विस्थापितहरूको नाममा भएको राजनीतिमा म सहभागी बन्न चाहन्न। यो हिलो छेपाईको, वर्चस्वको, सत्ताको राजनीति सकेपछि, चुनाउ सकेपछि म घर फर्किन्छु।’